Juventus oo mid ka mid ah xiddigaheeda u soo bandhigtay Chelsea si ay kaga hesho Jorginho – Gool FM
Dajiye June 2, 2020
(Turin) 02 Juun 2020. Kooxda Juventus ayaa doonaysa in ay sii xoojiso qadkeeda dhexe xilli ciyaareedka cusub, waxayna raacdo ugu jirtaa sida ay ku heli laheyd xiddig u qalmi kara inuu buuxiyo booska Miralem Pjanić oo la filayo inuu ka tago magaalada Turin.
Miralem Pjanić ayaa ku sii dhawaanaya inuu ka tago kooxda Juventus, si uu ugu biiro Barcelona xagaaga soo socda, iyadoo la filayo in labada kooxood ay sameyn doonaan heshiis isdhaafsi ah.
Haddaba wargeyska “La Gazzetta dello Sport” ee dalka Talyaaniga ayaa wuxuu shaaca ka qaaday horumarkii ugu dambeeyay ee la xiriira rabitaanka kooxda Juventus ee ah inay hesho adeega Jorginho.
Tababaraha kooxda Juventus ee Maurizio Sarri ayaa rajeynaya inuu la shaqeeyo Jorginho markii seddexaad, kaddib markii ay hadda kahor ka soo wada shaqeeyeen kooxaha Napoli iyo Chelsea.
Si kastaba ha noqotee, wargayska ayaa xaqiijiyay inuu jiro qorshe la doonayo in lagu badelo xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Juventus ee Federico Bernardeschi, qadka dhexe naadiga Chelsea ee Jorginho.
Wargeyska ayaa wuxuu intaas ku sii daray in Federico Bernardeschi ay u furan tahay inuu ku biiro horyaalka Premier League si uu ugu ciyaaro maaliyada kooxda Chelsea, taasoo suurtogal ka dhigi karta heshiiska isdhaafsiga ee la filayo in la sameeyo.
Juventus ayaa qiimo dhan 40 million euros kula soo wareegtay Bernardeschi xagaagii 2017, wuxuuna kaga soo dhaqaaqay kooxda Fiorentina, balse wuxuu ku guuldareystay inuu boos joogta ka helo shaxda tababare Maurizio Sarri.